Guddoomiyaha KULMIYE oo ka warbixiyay Socdaalkii uu ku soo maray sadex gobol | Somaliland.Org
November 25, 2011	Hargeysa (Somaliland.Org)-Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi, ayaa ka warbixiyay socdaalkii uu ku soo maray gobolada Saaxil, Togdheer iyo Daad-madheedh (Oodweyne), waxaanu sheegay inay dadweynuhu dhaliilo badana u soo jeediyeen ammaan badana u soo jeediyeen.
Guddoomiyaha oo shalay ka hadlay wuxuu sidaasi ku sheegay shir jaraa’id oo uu shalay ku qabtay magaalada Berbera. Guddoomiyaha oo sharaxayay socdaalkiisii wuxuu yidhi “Gobollada Togdheer iyo Daad-madheedh ee aanu soo maray waa lagu wanaagsanaa, hawlihii aanu u tagnayna si wacan bay noogu fuleen, dadku dareen wacan bay nagu soo dhaweeyeen. hawlihii tii xisbiga ee aanu u tagnay iyo kuwii maamul si wacan bay noogu dhammaadeen.Natiijada Hawlihii Kormeerka gobolladii aanu marnay ee Saaxil, Togdheer iyo Daad-madheedh qiimahooda qoraal baanu ku soo gudbin doonaa.”
“Waxaan hubaa dad iyo maamulba aad baa gobolladaas looga dedaalayaa in goboladaasi wax wacan qabteen, socdaalkayagii waxaan ku soo koobayaa wakhtigii ugu haboonaa inuu ku soo beegmay, hawlihii maamul iyo xisbina aanu ku guulaysanay,”ayuu yidhi Guddoomiyaha KULMIYE.
Md. Muuse Biixi oo ka hadlayay soo jeedimihii dadweynuhu ku qaabileen wuxuu yidhi “Dadka sanad iyo dheeraad baanu ka maqnayn doorashadii kadib laguma noqon, dadku dhalliilo badana way noo soo jeediyeen ammaan badana dawlad ahaan iyo xisbi ahaan way noo soo jeediyeen.”
Guddoomiyaha oo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi “Dhalliilaha naloo soo jeediyay way badanyihiin , mana aha kuwo sanad iyo laba ku dhammaan kara, waxaana ka mid ah Shaqo la’aanta ayaa ah ta ugu weyn ee dadka haysata, waddooyinkii oo aan waxba laga samayn, biyihii Daad-madheedh oo gobol weyn ah una baahan ceelal iyo riigag lagu qodo, caafimaadkii, waxaas oo dhammi waxay u socon waayeen dhaqaale la’aan.”
Muuse Biixi wuxuu sheegay in Berbera horumar ka hirgalay waxaanu yidhi “Meelaha mashaariicda iyo horumarka wanaagsani ka hirgalay waa Berbera, dawladeeda Hoose ayaa dhaqaale fiican heshay oo si wanaagsan u maamushay. Dabadeedbna mshaariic ay sammaysteen, meesha labaad waa Dekedda Berbera.”
“Guddiyadii gobollada wanau soo dhisnay, dadkii xisbiga waanu ku wacyigelinay inay u diyaar-garoobaan doorashooyinka soo socda oo aanu boodhka ka tunay, Waxaanu dib u habaynay hawlihii xisbiga oo dhan,”ayuu yidhi Guddoomiyaha KULMIYE Md. Muuse Biixi.
Previous PostJabuuti iyo Somaliland Oo ka wada hadlay iskaashiga khayraadka baddahaNext PostWasiirka Duulista Oo Addis ababa kula kulmay masuuliyiinta shirkada Itoobian Airline	Blog